Madaxwaynaadka ama Hydrocephalus - Somali Kidshealth
Madaxwaynaadka ama Hydrocephalus
05/08/2013 05/08/2013 by admin
Madaxwaynaad ama hydrocephalus waa dhibaato caafimaad oo carruurta yar yar madaxa ama maskaxda kaga dhacda. Magaca hydrocephalus wuxuu ka soo jeedaa eray Gariig ah oo ah Hydro oo macnaheedu yahay biyo iyo cephalus oo macnaheeda yahay madaxa. Macnaha erayga marka la isku kabo wuxuu soomaali ahaan ku noqonayaa Madax-biyood.
Cuddurkaan wuxuu u dhacaa farsamo ahaan marka dheecaanka maskaxda iyo arxaanka ee la yiraahdo cerebrospinal fluid uu dheeraad noqdo oo uu waayo meel uu ka dareero oo uu ka baxo. Dheecaanka shaqadiisu waa inuu nafaqeeyo oo haddana mayro maskaxda. Dheecaankan waxaa lagu sameeyaa khaanadaha maskaxda.
Waxaa jira godad yar yar oo ku yaala maskaxda dhexdeeda oo dheecaankani marka uu wasakhoobo uu ka dareero. Haddii gododkaas xirmaan ama ilmuhu ku dhasho iyaga oo xiran waxaa siyaada dheecaanka oo waaya meel uu ka baxo. Sidoo kale, waxaa kordha caddaadiska maskaxda dhexdeeda oo sababa aakhirka in lafaha maskaxdu fidaan oo madaxii waynaado.
Haddii aan la daawayn madaxwaynaadka ama hydrocephaluska waxaa dhacda in maskaxda dhaawac gaaro, inay dhumaan awooda maskaxeed iyo jirreed ee ilmaha iyo inay keentaba geeri. Marka hore oo la ogaado madaxwaynaadka iyo daawayn degdeg ahi waxay kordhisaa fursada soo kabasho guul leh.
Maxaa keena madaxwaynaadka ama hydrocephalus
Sidaan kor ku soo sheegnay xaaladani waxay timaadaa marka cerebrospinal fluid dareeraha la yiraahdo uu ku xayirmo khaanadaha maskaxda oo uu waayo meelihii uu ka dareeri lahaa. Madaxwaynaadka ama hydrocephalus carruurtu ama waa ku dhalataa ama waa jirro ku dhacda. Marka carruurtu ku dhashaan waxaa sababa marka si aan caadi ahayn ay u korto dareensidka laf-dhabarta oo ay dhacdo xaalada caafimaad ee la yiraahdo Spina bafida ama ay ciriiri noqdaan marinada ama gododka khaanadaha maskaxda ee ay ahayd inuu ka duso dheecaanka cerebrospinal.
Marka carruurta uu ku dhaco madaxwaynaadku ka dib dhalashadooda waxaa keeni kara marka ilmaha madaxa uu ka gaaro dhaawac keena in maskaxda uu ka dhaco dhiigbax. Waxaa dhacda mararka qaar in marka ilmaha la umulinayo, gaar ahaan kuwa dhiciska ah, uu dhaawac madaxa ka gaaro.
Burooyinka ka soo baxa maskaxda ayaa iyaguna keeni kara cuddurkaan. Waxaa kale oo sababi kara madaxwaynaadka caabuqyada ka dhaca maskaxda dhexdeeda iyo sababo kale oo aan ilaa hadda la aqoon.
Ilmo madaxa biyo kaga jiraan – wikimedia
Calaamadaha lagu garto madaxwaynaadka ama hydrocephalus
Calaamadaha lagu garto madaxwaynaadka waxay ku xiran tahay da’da ilmaha waayo ilmaha yar yar lafaha madaxu waa kala baxsan yahay oo isma qabsan, tusaale nush-nushleydu dhalada ku taal waxay cadaynaysaa inaysan lafaha madaxu weli is qabsan. Taasi waxay ilmaha ka yar halka sanno u fududaysaa in marka biyuhu madaxa ku bataan madaxii si fudud u kala baxo oo uu waynaado.
Carruurta waawayn oo lafaha madaxoodu is qabsaday waxay dareemaan xannuun badan oo ka imaanaya caddaadiska maskaxda saaran maadaama ay dheecaan badan oo cerebospinal fluid ah maskaxda ka buuxsamay.
Calaamadaha carruurta yar yar ee ilaa hal sanno jirka ah
Madaxa oo waynaada
Nush-nushleyda oo kor u soo kacda
Xididada dhiigga ee madaxa dushiisa oo soo muuqda
Wiilka isha oo hoosu dhaca sidii qorax dhacaysa.
Oohin qaylo leh oo badan
Ilmo madaxa biyo kaga jiraan oo wiilka ishu hoos u degay
Calaamadaha carruurta waawayn
Madax-xannuun saa’id ah oo ilmaha hurdada u diida
Isbadal ku yimaada dheeli-tirka jirka iyo darreenka
Aragtida indhaha oo wax kastaa u muuqdaan labo-labo (double vision)
Inta badan daawaynta xaaladan waxay u baahan tahay in ilmaha madaxa qalliin looga sameeyo si biyaha maskaxda caddaadiska ku haya loogu sameeyo marin ay ka dareeraan.
Hannaanka Shunt: Waa hab qalliin ah oo ilmaha madaxa laga galinayo tuubo Silicon ah oo tagta maskaxda dhexdeeda dabadeedna dheecaanka saa’idka ah kasoo qaadaysa oo raacsiinaysa dhiigga.
Ventriculostomy: Waa hab casri ah oo dhawaananahaan lagu qalo madaxwaynaadka. Habkaan dhaqtarka qalliinku wuxuu isticmaalaa qalabka la yiraahdo Endoscope oo leh kaamarad oo la dhex dhigayo maskaxda dabadeedna Kombiyuutar lagu hagayo qalliinka. Qalliinkaan waxaa dallool laga sameeyaa khaanada sadexaad ee maskaxda si dheecaanka saa’idka loogu ogolaado inuu ka dareero maskaxda.
Posted in Maskaxda - Darreemayaasha
Tagged dheecaan, madax-biyood, Madaxwaynaad
PrevKansarka carruurta ku dhaca